★မြန်မာ့အလင်း★: မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဦးဏှောက်ဟာ ဘာအတွက်လဲ?
မွတ်ဆလင်တွေဟာ သာမန်လူတွေနဲ့ ဘာမှ မကွာခြားပါဘူး။ ခြေနှစ်ချောင်း၊ လက်နှစ်ဖက်ရှိရုံမက ဦးဏှောက်လည်း ပါရှိပါတယ်။ တွေးခေါ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းလည်းရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျောင်းတွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေ ကနေ ပညာသင်သင်ထားသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ တွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်ပါလျက်နဲ့ မတွေးခေါ်၊ မစဉ်းစားခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။
မွတ်ဆလင်ဖြစ်လာတဲ့ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် ကုလားတွေကို အာရပ်တွေက မတရားသဖြင့် စစ်တိုက်ခဲ့တယ်။ ကုလားတွေရဲ့ အဖိုးကိုသတ်ပြီး အဖွားကို မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တယ်။ သတ်ဖြတ်၊ ရက်စက်ပြီးတော့ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေကို မွတ်ဆလင်အဖြစ် အဓမ္မ သွတ်သွင်းခံခဲ့ရတာပဲ။ သူတို့အဖိုးအဖွားတွေခေတ်မှာ ရက်စက်ခံခဲ့ရတာနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။အခုခေတ်မှာလည်း Allah ကို ကြောက်အောင် ဖြဲချောက်ထားတယ်။ Allah ကို မကန်တော့ရင် ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ်ဆိုတာကလည်း တမျိုး. . . မွတ်ဆလင်ကနေထွက်ရင် သတ်မယ်၊ ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်တာတွေကလည်း ရှိသေးတယ်။ အခုဗီဒီယိုဆိုလဲကြည့်ပါဦး။ မြေပြိုတဲ့ ဗီဒီယိုအတုကြီးကို ပြပြီး Allah က ကြောက်မက်ဖွယ် မြေငလျင်ကြီးဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုပြီး ခြောက်ထားပြန်တယ်။ ဒါဟာ ကုလားတွေကို ငအတွေဆိုပြီး စော်ကားတာပဲဗျ။ ဖြဲချောက်တိုင်း ကြောက်တတ်တဲ့သူတွေလို့ မြင်ထားတယ်။
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဦးဏှောက်ကို လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ခွင့်တော့ ပေးပါတော့။ ငါဟာ ဘာကြောင့် Allah ကို ကိုးကွယ်သင့်လဲ? မိုဟာမက်ပြောတဲ့ စကားတွေဟာ ယုံကြည်ရအောင် ဘယ်လိုအထောက်အထားတွေရှိနေလို့လဲ? မိုဟာမက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေက ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဘာကြောင့် လက်မခံနိုင်တာလဲ? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးကို ဖြေကြည့်ပါ။ အဲလိုတွေးလို့ ငရဲရောက်မယ်ဆိုရင်လဲ ရောက်ပါစေ။ Allah ပေးထားတဲ့ ဦးဏှောက်နဲ့ စဉ်းစားတာပဲ မဟုတ်ပါလား? (ခင်ဗျားတို့ အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာနဲ့ ဘယ်လိုကွာလဲ သိဖို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗီဒီယိုလေးပါ ပူးတွဲတင်ပြလိုက်ပါတယ်)
do u think muslim is the only relegion who has gays ? haha budhism has much much more gays .. even some ministers are gays ..even some army leders are gay ..you yourself is also gay who doing gay job!!!
budha ka lar ...alar gyi si su taung nay dal ... kya naw myo ..dog ba wa..pig ba wa ga loot pee lu sout phote ka lay hnite kwint ya chin bar dal dat :P
min dot budha bar thar koayin lu zin mhee aung lote ohn ..mohamed ga lu sout phote hnit ..min budha ga animal sout phote hnite nay ya shar dal lay kwar
zaw myo nat kway loe ma thar ta theik ka ..dog phyit lite pig phyit lite sout ka lar lay budha koahote gyi htin nay dar ga lar thout...thout..thout ..ta narr sa yar that ta war myar bar lar
ngat yin phone gyi wut ..thi la shin wut ..a chaung sar lo ya lo budhism lote kya dar lay ..lu lit yin lu wut lal pee sout ka myin jaw hta ja dar ..truelight myanmar mhar twar kyi..photo proof shi dal
So.. min dot looser lote chin yin budhism lote..out tan zar general labour so pee muslim country dway si gaung ngont win..twal kat nay pop kwar..sout shat mha ma shi bae..gone tha yay shi pho so way yaw :P
lu ga mway thaw lu myar .. bar thar phyat ..thar tha nar phyat alote ma lote kya bar ..phar thal ma thar myar thar lote thee ...dan tan..tan...
kae ...phar thal ma thar myar ..B za pya nai B :D
sorry May ..i use ur gmail again ..cos they ask me to through gmail to commence ..
ဒုက္ခ။ဗမာမ‌ကောင်းဘူး ‌ပြောတဲ့ ‌ကောင်‌က burmaglish နဲ့‌ရေးရှာတယ်‌။သူ့ပ‌ထွေး ‌တွေ မဖတ္တတ်‌ မှာစိုးလို့။